bhimphoto: गाउँमा कचहरी
विराटनगर - गाविस सचिवले हिसाब पारदर्शी नराखेको विषयमा भइरहेको सडक बहसमा एक व्यक्ति झोक्किए । उनले अघि सरेर भने 'म पनि गाविसको सचिव हुँ, हामीलाई यसरी पेल्ने ?' गाविसले विकास बजेटमार्फत गराउने कामका लागि सचिवको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई बजेट दिलाइदिनु मात्र भएको बताएका उनले भने 'हिसाब उपभोक्ता समितिको खोज्नुस ।' यो कुनै झगडा थिएन । विराटनगरस्थित आरोहण गुरुकुलले मोरङको दर्वेशामा 'कचहरी' सडक नाटक मञ्चन गरिरहँदा त्यही बाटो हिडेका शनिश्चरेका गाविस सचिव धर्मराज अधिकारीले यस्तो बताएका थिए ।
सडकमा नाटक थालेका कलाकारको हुलले कम गुणस्तरको कुलो बनाउने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनेका पात्रसँग हिसाब मागेका थिए । अध्यक्षले काम सिध्याएर हिसाब गाविसमा बुझाइसकेपछि जनतालाई बुझाउने जिम्मेवारी गाविस सचिवको भएको जवाफ फर्काए । सचिवकहा पुगेका जनताले जवाफ पाए 'यसको हिसाब उहिल्यै फर्छ्यौट भइसक्यो । हिसाब सूचना पाटीमा टास पनि गरेको हो । बेला न कुबेला आएर यसरी खोज्न पाइन्छ ?' सचिवले दिएको जवाफ स्थानीयवासीलाई मन परेको थिएन । अनि उनीहरुले कचहरी बोलाए । र, हिसाब कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने छलफल चलाए । उनीहरुले दोष सचिवकै देखेको दृश्य मञ्चन भइरहदा छेवैमा उभिएर नाटक हेर्दै गरेका अधिकारीलाई खपिनसक्नु भएको थियो । उनले नाटकप्रति आक्रोश मात्र पोखेनन् , हिसाब चाहने जनताले उपभोक्ता समितिमार्फत भएगरेका कामको जायजा लिइरहनुपर्ने बताए । अधिकारी कलाकार थिएनन् । उनलाई नाटकका विषयमा पनि जानकारी थिएन । तर, उनले नाटकमा देखाउन खोजिएको सन्देशलाई न्याय गरे ।
मोरङका १५ स्थानमा कचहरी लिएर पुगेका गुरुकुलका कलाकारका लागि दर्वेशाको मञ्चन यात्राभर मध्येको पृथक अनुभव थियो । कलाकार तथा स्रस्टा विवस पोखरेल भन्छन् 'धेरैखालको अनुभव हुने रहेछ ।' उनका अनुसार धेरै गाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणको गुणस्तर र खर्चको हिसाबलाई जनताले पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा हेक्का राखेको भेटिएन ।
'स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्र कसरी बलियो हुनसक्छ भन्ने यो सानो हेराइ हो, उनले भने 'तर, यसले ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ ।' गाउँ-नगरमा स्थानीय निकायले विकास निर्माणका काम स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट गराउने अभ्यास पुरानो भएपनि तिनको विषयमा लिनुपर्ने चासो जगाउन नाटक मञ्चन गरिएको उनले बताए । यहाको हाटखोलास्थित गुरुकुलले लेटाङ, केराबारी, इन्द्रपुर, बयरबन, मृगौलिया, डागीहाट इटहरा, सिजुवा, अमरदह, दर्वेशा, बैजनाथपुर, हरैचा र कसेनीलगायत गाविसका १५ स्थानमा नाटक देखाएर फिरेको छ ।
सडक नाटक मञ्चनमा कलाकारहरू जीवन कुइकेल, विवश पोखरेल, रामकुमार प्याकुरेल, मिलन नेपाली, रामभजन कामत, गजेन्द्र खतिवडा,सुशील पोखरेल उद्धव सापकोटा, दीपा पोखरेल र सीता न्यौपाने आदिले अभिनय गरेका थिए ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 2:25 PM
content catagory साभार
पहिले मानव अहिले अर्थोक
प्राकृतिक स्रोत र हामी